Global Voices teny Malagasy » Koety: Navotsotra ilay bilaogera nogadraina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2019 7:05 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Koety, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Zon'olombelona
Taorian'ny tabataba  teo an-toerana sy avy any amin'ny faritra, navotsotra tany Koety androany vao maraina ilay bilaogera Koesiana Bashar Al-Sayegh. Raha nankalaza ny famotsorana azy ny bilaogera sasany, ny hafa kosa nampitandrina fa mety ho marika faneriterena bebe kokoa izay mety hampihenana ny fahalalaham-pitenenana ao Koety izany. Bilaogera iray hafa naneho ny tsy fankasitrahany ny polisy izay mandika lalàna ary namoaka lahatsary ahitana polisy miherisetra ara-batana amin'ireo mpiasa Aziatika ao amin'ny firenena manankarena solika.
Nosamborina i Al-Sayegh taorian'ny fanehoan-kevitra nataona mpaneho hevitra tsy fantatra anarana, izay naniratsira ny filoham-pirenena Koesiana, Shaikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah  tao amin'ny forum antserasera  (Ar) tantaniny.
Nosamborina niaraka tamin'i Al-Sayegh i Jassim Al-Qames, izay mpiara-miasa amin'i Al Sayegh sady mpaka sary ao amin'ny gazety Al Jarida, noho ny fakàna sary ny fisamborana azy. Navotsotra izy avy eo saingy nilaza fa niharan'ny herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana nanao ny fisamborana.
Niparitaka tao amin'ny bilaogy avy hatrany ny vaovao momba ny famotsorana an'i Al-Sayegh sy ny fisamborana ilay olona izay nanao ny fanehoan-kevitra tany am-boalohany raha vao navotsotra ilay bilaogera.
Nahitana ny sary etsy ambony ny tranonkala antserasera Koesiana Al Aan , izay mampiseho ireo mpanohana milanja an'i Al-Sayegh eo an-tsorony.
Manoratra ao amin'ny forum-ny , Al-Sayegh nampanantena hanohy ny bilaoginy (Ar):
شكرا؟؟ دين في رقبتي؟لا أعلم .. موقفكم ..
تعبر عن مشاعري تجاهكم ..لن أنسى موقفكم .. فهذا دين في رقبتي ..
والاستمرار في نهجنا الذي بدأناه معا ..شكرا لجميع المدونات والمواقع الالكترونية ..
Tsy fantatro hoe aiza no hanombohana ..
Misaotra anareo?? Manan-trosa efaina ho anao mandrakizay aho?
Tsy fantatro, fa ny fihetsikareo.
Tsy misy teny .. na vondrona taratasy ..
Izay afaka maneho ny fahatsapako ho anareo rehetra ..
Tsy hohadinoiko mandrakizay ny fihetsikao tamiko .. Manan-trosa aminao mandrakizay aho.
Ary tsy ho vitako mihitsy ny hamerina izany trosa izany afa-tsy amin'ny fanohizana ..
Fanohizana ny tranonkala Al Ommah sy ny tsenan-kevitra ..
Ary manohy ny dingana efa noraisintsika.
Misaotra ireo bilaogy sy tranonkala an-tserasera rehetra.
Ary ireo gazety mpivoaka isan'andro izay nanohana ahy.
Misaotra ireo fiarahamonim-pirenena sivily rehetra.
Tsy taitra tamin'ny fisamborana ilay bilaogera Koesiana Jandeef ary milaza fa tsy mba manaja ny lalàna sy ny lalàmpanorenana mihitsy ny polisy Koesiana raha resaka fikarakarana olona. Nandefa ireto lahatsary roa manaraka ireto izy izay mampiseho mazava tsara polisy manao fanamiana miherisetra amin'ireo mpiasa Aziatika ao Koety.
Blurted by The Aggressor nilaza  fa ny fisamborana an'i Al Sayegh dia midika fandefasan-kafatra ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy ao Koety.
Mety mitovy amin'ny hafatra avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany Koesiana ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy Koesiana izy ity, mampahafantatra antsika fa manara-maso antsika ny minisitera, ary manaramaso ny fanehoan-kevitra sy ny hetsika ataontsika, na amin'ny aterineto na-mety ho ivelan'ny ihany koa. Raha izany no izy, tsy tokony hahay hanavaka ny mpitantana sy ny mpaneho hevitra tsy fantatra anarana ve izy ireo? Tena matotra …. aoka moa e, siora !?
Kiwi Nomad ihany koa nizara fihetseham-po toy izany ary nanamarika hoe:
Antenaina fa ho tafita ny hafatra mba hiova ny Polisy misahana ny fiarovam-panjakana ary hanaja ny lalàn'ny fanjakana … Ho an'i Bashar sy Jassem kosa, manantena aho fa hitondra fanavaozana ny fampielezana ny zava-niainan'izy ireo. Tsara ny manamarika fa iray amin'ireo tranga maro tsy navoaka ity. Arahabaina ry namana noho ny fijoroana sy tsy natahotra
The Ultimate, na izany aza, nandray lalana hafa ary manolotra tononkalo  ho an'i Al Sayegh.
Miandry ny Mpijinja (aina)
Antsimbilona eo an-tanana
Raha mankalaza ny firenena
Afaka i Bashar
Iza no manaraka
Mandoa ny trosa!
Rahoviana no ho anjarako izany?
Rahoviana no anjaranao anao izany?
Fotoana fotsiny izany
Ary tsy mamindra fo na amin'iza na iza ny fotoana
Moa ity nofy ratsy ity?
Manontany tena aho
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/27/137615/
 Shaikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah: http://en.wikipedia.org/wiki/Sabah_Al-Ahmad_Al-Jaber_Al-Sabah
 forum antserasera: http://www.alommah.org/home/
 Al Aan: http://www.alaan.cc/client/page.asp?page=bashar
 Tsy taitra : http://kuwaitjunior.blogspot.com/2007/08/blog-post_22.html
 nanamarika : http://kiwi_nomad.blogspot.com/2007/08/freedoms-tested-as-journo-jailed.html
 manolotra tononkalo: http://3asal.wordpress.com/2007/08/21/bashar-is-free/